कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या १९ हजार ६ सय नाघ्यो ? कहाँ कति हेर्नुहोस्! Arthadaily: Search for truth and fact.
विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण बुधबारसम्म १९ हजार ६०४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यो भाइरसबाट ४ लाख ३४ हजार ५९५ जना सङ्क्रमित भएका छन् । सङ्क्रमित व्यक्तिहरुमा १ लाख ११ हजार ८५३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हालसम्म १९५ भन्दा बढी देशमा देखा परीसकेको छ ।
चीनको हुबेई प्रान्तको उहान शहरबाट शुरु भएको कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’को सङ्ज्ञा दिएको छ । चीनको हुबेई प्रान्तको उहानबाट शुरु भएको यस कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट चीनभरी तीन हजार २८१ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने, ८१ हजार २१८ जना सङ्क्रमित रहेका छन् । ७३ हजार ६५० व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
हाल कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्त प्रभावित भएको इटालीमा यस रोगको सङ्क्रमणको कारण ६ हजार ८ सय २० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हाल ६९ हजार १७६ जना सङक्रमित रहेका छन् । ८ हजार ३ सय २६ व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
इरानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण २ हजार ७७ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हाल २७ हजार ०१७ जना सङक्रमित रहेका छन् । ९ हजार ६ सय २५ व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका बताइएको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण स्पेनमा ३ हजार ४ सय ३४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हाल ४७ हजार ७ सय १० जना सङक्रमित रहेका छन् । ५ हजार ३ सय ६३ व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
जर्मनी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण १७२ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हाल ३४ हजार ९ जना सङक्रमित रहेका छन् । यसैबीच ३ हजार ५ सय ५३ उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण ७८४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हाल ५४ हजार ९ सय ४१ जना सङक्रमित छन् भने, ३८९ उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
फ्रान्समा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १ हजार १ सय जनाको मृत्यु भएको छ । २२ हजार ३ सय ४ सङ्क्रमित रहेका छन् भने ३ हजार २ सय ८१ उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १२६ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ९ हजार १ सय ३७ सङ्क्रमित भएका छन् । ३ हजार ७ सय ३० उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
स्विट्जरल्याण्डमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १३५ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । १० हजार १ सय ७१ सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच १३१ जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
नेडरल्याण्डमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण २७६ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ५ हजार ५ सय ६० सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच २ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
अष्ट्रियामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण ३० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ५ हजार ४ सय ९४ सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच ९ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
बेल्जियममा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १७८ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । नर्वेमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १३ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण ब्राजिलमा ४७, स्वेडेनमा ४०, पोर्चुगलमा ३३, क्यानाडामा २६ , डेनमार्कमा ३२, मलेसियामा १९, आयरल्याण्डमा ७ , पोल्याण्डमा १२ , ग्रीसमा २०, इन्डोनेसियामा ५८ र फिलिपिन्समा ३८ रहेका छन् ।
हङकङमा ४, इराकमा २३ अल्जेरियमा १७ , भारतमा १०, पाकिस्तानमा ६, थाईल्याण्डमा ४, सिङ्गापुरमा २, रुसमा १, पेरुमा ५, मेक्सिकोमा ४, इजिप्टमा १९, पानामा ६ अर्जेन्टिनामा ४, लेवनान ४, संयुक्त अरव इमिरेट्समा २, ताइवानमा २, सानमरिनोमा २०, हङ्ग्रेरीमा ८, मोरोक्कोमा ४, अफगानिस्तानमा १, नाइजेरियामा १ , बङ्गलादेशमा ३, घानामा २, सुडानमा १ व्यक्तिको मृत्यु भएको आज प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।